Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliland oo lagu xir xiray Magaalada Hargeysa. | SN-TV Online
Hargeysa ( Sh. M. Network)-Wararka laga helayo Magaalada Hargeysa ee Maamulka Soomaaliland ayaa ku soo waramaya in Xabsiga loo taxaabay Xubno ka tirsan Golaha Wakiilada Maamulkaas.
Xildhibaanada la xiray ayaa la sheegay in ay buuq iyo Rabshado ka sameeyeen Xarunta Baarlamaanka Maamulkaas,gaar ahaan Xafiiska Guddoomiyaha Cusub ee Golaha Wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax.
Wararka qaar ayaa shegaya in Rasaas laga dhex maqlay Xarunta Baarlamaanka Soomaaliland, taasoo keentay in la xiro Xildhibaanno ka tirsan Golaha Wakiilada Soomaaliland.
Magaalada Hargeysa ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay laga dareemayay Buuq iyo Rabshado xoogan oo ka dhashay Doorashadii Guddoomiyaha Baarlamaanka ee uu ku guuleystay Baashe Maxamed Faarax, sida ay ku dhawaaqeen Guddigii doorashadaasi.
Waxaana Cabdiraxmaan Maxamed Tayanle oo la tartamay Baashe Maxamed Faarax waxyar, kadib doorashadaasi uu sheegay in Isagu yahay Guddoomiyaha Rasmiga ah ee Baarlamaanka Maamulkaas, islamarkaana la Musuqmaasuqay Doorashadii ay wada galeen isaga iyo Xildhibaan Baashe Maxamed Faarax.